Ungakusetha Kanjani Ukukhanyisa Ngamaphoyinti Ama-3 Kwividiyo Yakho Ebukhoma | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 18, 2020 NgoLwesibili, ngo-Mashi 2, i-2021 Douglas Karr
Besilokhu senza amanye amavidiyo we-Facebook Live asetshenziswa amaklayenti ethu IStudio Situdio futhi ngithanda ngokuphelele ipulatifomu yokusakazwa kwamavidiyo amaningi. Enye indawo ebengifuna ukuthuthuka kuyo ukukhanya kwethu, noma kunjalo. Ngiyi-video newbie encane uma kukhulunywa ngala macebo, ngakho-ke ngizoqhubeka nokuvuselela lawa manothi ngokuya ngempendulo nokuhlolwa. Ngifunda ithani kochwepheshe abangizungezile - okunye engabelana ngakho lapha! Kukhona futhi ithani lezinsizakusebenza ezinhle online.
Sinophahla olungamamitha angu-16 estudiyo sethu ngokukhanyisa okumangazayo kwe-LED ophahleni. Kuba nemithunzi emibi (ekhomba ngqo phansi)… ngakho ngibonisene nomthwebuli wevidiyo wethu, u-AJ we I-Ablog Cinema, ukuze kutholakale isixazululo esingabizi, nesiphathekayo.
I-AJ ingifundise ngokukhanyisa kwamaphoyinti ama-3 futhi ngamangazwa ukuthi ngangingalungile kanjani ngokukhanyisa. Bengihlala ngicabanga ukuthi isisombululo esihle kakhulu kungaba ukukhanya kwe-LED okubekwe ekhamera okukhomba ngqo kunoma ngubani esasixoxa naye. Akulungile. Inkinga ngokukhanya ngqo phambi kwesihloko ukuthi empeleni ihlanza ubukhulu bobuso kunokuba ibancome.
Kuyini ukukhanya kwamaphoyinti amathathu?
Umgomo wokukhanyisa kwamaphoyinti ama-3 ukugqamisa nokugqamisa ubukhulu besihloko (kwezi) kuvidiyo. Ngokubeka izibani ngamasu aseduze kwesihloko, umthombo ngamunye ukhanyisa ubukhulu obuhlukile besihloko futhi udale ividiyo enokuphakama okukhulu, ububanzi nokujula… konke ngenkathi kususwa izithunzi ezingabukeki.
Ukukhanyisa kwamaphoyinti amathathu kuyindlela esetshenziswa kakhulu yokuhlinzeka ngokukhanyisa okuhle kumavidiyo.
Izibani Ezintathu Ekukhanyeni Ngamaphoyinti Ama-3 Ziyi:
Ukukhanya Khiye - lokhu ukukhanya okuyinhloko futhi kutholakala ngqo ngakwesokunene noma ngakwesobunxele sekhamera, i-45 ° ukusuka kuyo, ikhombe i-45 ° phansi endabeni. Ukusetshenziswa kwesisabalalisi kuyadingeka uma izithunzi zinzima kakhulu. Uma ungaphandle ekukhanyeni okukhanyayo, ungasebenzisa ilanga njengokukhanya kwakho kokhiye.
Gcwalisa Ukukhanya - ukukhanya kokugcwalisa kukhanya endabeni kepha kusuka engxenyeni eseceleni ukunciphisa isithunzi esikhiqizwa ukukhanya kokhiye. Ijwayele ukusakazwa futhi cishe isigamu sokukhanya kokukhanya kokhiye. Uma ukukhanya kwakho kukhanya kakhulu futhi kukhiqiza isithunzi esithe xaxa, ungasebenzisa isibonakaliso ukuthambisa ukukhanya - ukhomba ukukhanya okugcwalisayo kusibonakalisi bese kukhombisa ukukhanya okusabalalisiwe endabeni.
Ukukhanya Kwasemuva - okwaziwa nangokuthi usebe, izinwele, noma ukukhanya kwehlombe, lokhu kukhanya kukhanya endabeni ngemuva, kwehlukanisa isihloko ngemuva. Abanye abantu bayisebenzisa ohlangothini ukuthuthukisa izinwele (ezaziwa njenge umqaphi). Abadwebi bamavidiyo abaningi basebenzisa i- ukukhanya kwe-monolight lokho kugxile ngqo esikhundleni se-overhead esakazeke kakhulu.
Qiniseka ukuthi ushiya ibanga elithile phakathi kwesihloko sakho nesizinda ukuze izibukeli zakho zigxile kuwe kunokuzungezile.
Ungakusetha Kanjani Ukukhanyisa Oku-3-Point
Nayi ividiyo emnandi, efundisayo yokuthi ungakusetha kanjani kahle ukukhanya kwamaphoyinti ama-3.
Ukukhanya Okunconyiwe, Ukushisa Kwemibala, nama-Diffusers
Ngokunconywa ngumthwebuli wami wevidiyo, ngithenge i-ultra-portable Aputure Amaran Izibani ze-LED futhi 3 we amakhithi e-frost diffuser. Izibani zinganikwa amandla ngqo ngamaphakethe amabili ebhethri noma zixhunywe kunikezwe amandla okuhambisana nakho. Sathenga ngisho namasondo ukuze sikwazi ukuwagoqa kalula ehhovisi njengoba kudingeka.
Lezi zibani zinikeza amandla okulungisa izinga lokushisa kombala. Elinye lamaphutha elenziwa ngabadwebi bamavidiyo abasha abaningi ukuthi bahlanganisa amazinga okushisa ombala. Uma usegumbini elikhanyisiwe, ungafisa ukuvala noma yimaphi amalambu lapho ukuze ugweme ukushayisana kombala wokushisa. Sivala izimpumputhe zethu, sicishe amalambu aphezulu, bese sibeka izibani zethu ze-LED ku-5600K ukuze sinikeze ukushisa okupholile.
Sizofaka nokukhanyisa ngaphezulu kwesitudiyo samavidiyo ngaphezulu kwethebula lethu le-podcasting ukuze sikwazi ukushutha bukhoma i-podcast yethu nge-Facebook Live ne-Youtube Live. Kungumsebenzi wokwakha omncane njengoba nathi kufanele sakhe ifreyimu esekelayo nayo.
Aputure Amaran Izibani ze-LED Amakhithi we-Frost Diffuser
Ukudalula: Sisebenzisa izixhumanisi zethu zokubambisana ze-Amazon kulokhu okuthunyelwe.
Tags: Izibani ezi-3-point5600kukugcwalaukudubula amaranukukhanya emuvaikhithi engcono yokukhanyisagcwalisa ukukhanyaukukhanya kwezinweleukukhanya okhiyeumqaphiisibani sokukhahlelaumbala okhanyayoisibonakaliso sokukhanyainkolelo elulaUkukhanyisaikhithi ekhanyayoIzibaniukukhanya kwe-monolightikhombisaistudiyo sokushintshaukukhanyisa ividiyoikhithi yokukhanyisa ividiyoizibani zevidiyo
I-WordPress Plugin: Vula Ividiyo Ku-Lightbox ene-Elementor